Tilmaamaha Safarka Marinka Qaza - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Safarka Xalaal ee Falastiin
Tilmaamaha Safarka Marinka Qaza
Covid-19 ee Falastiin
The Gaza Strip (Carabi غزة, Ghazzah) waa dhul Falastiin ka tirsan Bariga Dhexe. Magaalada ugu weyn waa Qaza. Qeybo ka mid ah boggan, oo lagu qoray khibrado 10-kii sano ee la soo dhaafay, ayaa laga yaabaa inay taariikhda ku jiraan waayo-aragnimooyinkii laga soo qaatay ka hor intii aysan Xamaas la wareegin 2007, khilaaf millatari oo furan (27 Dec 2008 - 18 Jan 2009), ama go'doominta Israel way ka duwan tahay tan xaaladda hadda jirta ee dhulka. Laga soo bilaabo bishii Luulyo 2014, dib ugu noqoshada iskahorimaadka milateri wuxuu dhibaato weyn ka geystay gobolka, iyadoo la burburiyey hanti iyo dhimasho dad rayid ah, in kasta oo xabad joojin la isku dayey.
Hordhaca marinka Qaza
Waxaa u dhexeeya Israa'iil iyo Masar, Gaza maahan arrin cadaabta daahirka ah ee aad filan karto inaad bixiso caymiska TV-ga, in kasta oo meeshani ku dhalatay intifada iyo mid ka mid ah qaybaha meeraha dadku ku badan yahay ma aha jannada dhulka, sidoo kale. Waxay leedahay kaabayaal casri ah oo macquul ah iyo qaab dhismeed inkasta oo dhibaatooyinkeeda ay jiraan, laakiin warbixin UN-ka ah horaantii 1952 ayaa lagu sheegay in Marinka uu aad u yar yahay oo aan la taageeri karin dadkiisa 300,000, hadana waxaa jira in ka badan 1.7 milyan oo qof halka heerka shaqo la'aanta ay ka badan tahay 40.6 %.
Inta badan dadka degan waxay ka soo farcameen qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee ka qaxay ama laga eryay guryahoodii Israel intii lagu jiray dagaalkii 1948 loomana oggola inay ku noqdaan guryahoodii iyo tuulooyinkoodii dagaalka ka dib. Maaddaama ayan ahayn muwaadiniin Masaari ah looma oggola inay galaan Masar, sidoo kale.
Taariikhda Marinka Qaza
Gaza waxay in muddo ah jirtay: tixraaca ugu horreeya ee la yaqaan waa qoraal ku yaal Macbudka Amun ee Karnak, Masar, taariikhdiisu tahay 1500 BC, kaas oo sheegaya in magaalada Qaza ay 'barwaaqo' tahay. Muddo dheerna way qabatay: boosteejo socodsiinta jidadka ganacsiga ee isku xira Aasiya iyo Beershiya iyo Carabta, Masar iyo Afrika, xitaa magaca macnihiisu waa "khasnad" Carabi ah. Alexander the Great wuxuu go'doomiyay magaalada 332 BC, isagoo toogtay 10,000 oo difaac ah ka dib markii la haystay muddo laba bilood ah. Goor dambe, magaalada waxaa qabsaday Roomaankii, Saliibiyiintii, Mamlukyadii, Cusmaaniyiintii iyo weliba muddo kooban xitaa Faransiis baa qabtay 1799, markii Napoleon Bonaparte uu xero ka degay isagoo u socda inuu ka adkaado Masar. Turkidu dib ayey ula wareegeen, ka dibna waxay ka waayeen Ingriiska Dagaalkii Koowaad ee Dunida Ciidankii Masar ayaa qabsaday intii lagu jiray dagaalkii 1948 ee horseeday madaxbanaanida Israel, furitaanka xeryo qaxooti Falastiiniyiin ah - xaalada hada waxay bilaabatay markii Israel qabsatay Marinka 1967 .
Waxaa kiciyay rabshadihii 1987 - 1993kii Inifada ("Kacdoon"), Israel iyo Ururka Xoreynta Falastiin ayaa kala saxiixday "Baaqa Mabaadi'da ee ku saabsan Qabanqaabinta Is-Dawladeed Ku-Meel Gaarka ah" 1993, iyada oo lagu aasaasay Maamulka Falastiin (PA) inay maamusho Marinka Gaza iyo Daanta Galbeed ee ku-meel-gaadhka ah Muddo “aan ka badnayn shan sano” oo ah tallaabo loo qaaday madaxbannaanida buuxda. Qeybo ka mid ah dhulalka ayaa runtii loo dhiibay PA intii u dhaxeysay 1994 iyo 1999, laakiin qorshooyinka nabadeed waxaa ka weeciyay labaad intifada kaas oo qarxay bishii Sebtember 2000, isagoo soo daayay rabshad kale.
Israa’iil ayaa si keli keli ah uga baxday Gaza sanadkii 2005, iyadoo faarujisay deegaamaynta Yuhuudda isla markaana ciidamadeeda kala baxday dhulkaas. Si kastaba ha noqotee waxay sii haysatay maamulka hawada iyo xeebta marka lagu daro xaqiiqda ah in gobolka oo dhan lagu wareejiyay xayndaab ammaan oo ballaaran.
Hamas ku guuleystey doorashooyinkii 2006 isla markaana si xoog ah u laaday haraadiga Maamulka Falastiin ee 2007. Intii uu Xamaas xukumayey, waxaa soo noqnoqdey dhacdooyin gantaallo laga soo ridayo Gaza oo lagu soo furey Israel iyo Israa’iil oo dilal qorshaysan lala beegsanayey xubnaha Xamaas ee Gaza, qaraxyada, iyo duulaanka ama duullaanka Qaza. Israel ayaa sidoo kale si weyn u xaddiday dhaqdhaqaaqa ganacsiga, gargaarka, iyo dadka u dhexeeya Gaza iyo Israel iyada oo ka jawaabeysa weerarada ka dhaca goobaha laga gudbo xuduudaha iyo aqoonsiga dowladda Xamaas ee Israel.
Xiriirka udhaxeeya Xamaas iyo dowlada Masar ayaa sidoo kale mararka qaar kacsanaa, iyadoo dowlada Masar mararka qaar ku eedeyso Xamaas weerarada ay la beegsato ciidamada amaanka Masar iyo dadka shacabka ah ee Siinaay laakiin sidoo kale waxay cambaareyneysaa falalka Israel ee ka dhanka ah Gaza. Laga soo bilaabo Diseembar 2008 ilaa Janaayo 2009, Israel waxay qaaday duulaan ballaaran oo isku dhafan oo isugu jira cirka, badda, iyo dhulka oo ka dhan ah dowladda Xamaas iyo ururada xagjirka ah ee xulafada la ah. Colaaduhu waxay dib u bilaabeen 2012, laakiin xabad joojin muddo kooban socotey ayaa dib loo soo celiyey iyada oo gacan laga helayo dhexdhexaadinta Masar.
Sannadkii 2014, Xamaas waxay gantaallo ka soo bilowday Qaza illaa 160 km (100 mayl) dhulka Israa’iil; Israa’iil waxay weerar rogaal celis ah ku qaadday duqeymo xagga cirka ah iyo duulaan dhulka ah, oo sababay khasaaro baaxad leh oo rayid ah iyo burburinta dhismayaal badan oo ay ku jiraan iskuulada UN-ka iyo isbitaalada. Waxaa jira xabad joojin aan wanaagsaneyn oo jirta, hase yeeshe tani way isbadali kartaa daqiiqad ogeysiis ah. Aad uma badna inaad awood u yeelato inaad gasho Qasa ilaa aad ka noqoto suxufiga la aqoonsan yahay, ama UN ama shaqaalaha samafalka, waxaadna sameyn doontaa qiimeyn qoto dheer oo qatar ah. Ha isku haleynin kaliya aqrinta hagaha safarka iyada oo qeyb ka ah qiimeynta halista. Haddii aad ku guuleysato inaad gasho Gaza, la soco in kaabayaasha rayidka ah ay si aad ah u waxyeelleeyeen, oo joogitaankaaga qadka ayaa ka weecin doonta ilaha ka imanaya dadka baahan, runtiina waa inaad sida ugu dhakhsaha badan uga tagtaa sida ugu dhakhsaha badan.
Marinka Gaza waa dhul cidhiidhi ah, 40-km oo dherer dhul ah oo u dhexeeya badda dhexe ee Mediterranean ilaa galbeedka iyo lamadegaanka Negev ee bariga. Masar waxay dhacdaa koonfurta, waqooyiga iyo bariga xadka Israel. Fiditaanka magaalooyinka Magaalada Gaza, oo inta badan ku fidsan iyo hareeraha 3-km dheer ee Omar al-Mukhtar Street, ayaa daboolaya inta badan woqooyiga. Magaalooyinka kale ee ugu waaweyn ee Khan Yunis iyo Rafah waxay u dhow yihiin xadka koonfureed, intiisa badanna waxaa lagu soo koobay dhul beereed.
Waxoogaa erey bixin ah: Gaza Strip waxaa loola jeedaa 40km oo dhan oo 6km ah oo dhul ah. Xaragada ayaa waxyar ka yar Barbados waxyarna wey ka weyn tahay Malta. Gaza City waxaa loola jeedaa magaalada lafteeda, qaybta woqooyi ee xariga, laakiin kororka tirada dadka oo aad u weyn awgeed Magaalada ayaa hadda ku fiday tuulooyin badan oo ku hareeraysan waana howl adag in la sheego waxa ka mid ah Magaalada iyo waxa aan ahayn. Magaalada iyo xariiqdaba labadaba si isweydaarsi badan ayaa loo yaqaan Gaza tilmaamuhuna wuu kudayan doonaa
Kuleyl, jiilaal khafiif ah, qalalan oo diirran xagaaga kulul.
Joogto loo rogo rogid, ciid iyo carro daboolan oo dhul xeebeed ah. Dhul beereed.
Qodobka ugu sarreeya: Abu 'Awdah (Joz Abu' Auda) 105 m
Gelitaanka Gaza waa labadaba adag oo aan caqli lahayn. Xaqiiqdii, illaa qiyaastii 2003, dhammaanba dadka soo booqan lahaa waxaa looga baahnaa inay horay u sii dalbadaan ogolaanshaha Israel inay ku galaan Marinka. Codsiga waxaa badanaa lagu gudbiyaa safaaraddaada Israel, aragti ahaanna waxay qaadataa inta u dhexeysa 5-10 maalmood. Ficil ahaan, waxay qaadan kartaa bilooyin, oo haddii aadan aheyn wariye si buuxda loo aqoonsan yahay ama shaqaale gargaar / xuquuqul insaan, uma badna inaad heli doonto ogolaansho inaad Gaza uga gasho Israel.
Waa suurta gal in laga galo Qaza dhanka Masar iyadoo la marayo marinka Rafah. Isgoyska waxaa loo furay taraafikada Juun 1, 2010 inkasta oo xaddidaadaha qaar wali ay socdaan oo kaliya kooxaha waaweyn ee safarada ay maalgaliso NGO-yada la aqbali doono Mas'uuliyiinta Masar ayaa xukuma kaliya dhinacooda isgoyska iyadoo booliska Xamaas ay ka howlgalayaan dhinaca kale. Si kastaba ha noqotee, Falastiiniyiinta (marka laga reebo ragga u dhexeeya 18 iyo 40) waxaa loo oggol yahay inay u gudbaan Masar fiiso la'aan. Warbixinno ayaa jira booliska Hamas oo weydiisanaya laaluush dhan US $ 5,000 si loogu oggolaado dadka, oo ay ku jiraan Falastiiniyiinta, inay ka baxaan Qasa.
Qaza ma lahan garoon diyaaradeed oo shaqeeya, maadaama garoonka diyaaradaha ee Yasser Arafat International Airport () la xiray tan iyo sanadkii 2000. Garoonka diyaaradaha waxaa si xun u waxyeeleeyay weeraradii duqeynta ee Israa’iil - tii ugu dambeysay ee 2009 - ka dibna waxaa burburiyey cagaf cagafyada Israa’iil - umana badna in dib loo furo. mustaqbalka dhow. Ciidanka Cirka ee Israel ayaa kula socda hawada Gazan radar, waxayna si joogto ah ugu diraan Gaza ilaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo diyaaradaha dagaalka. Buufin ilaalin ah ayaa sidoo kale lagu xiraa Isgoyska Erez. Waqtigaan la joogo, garoomada diyaaradaha ee ugu dhow waa El Arish International Airport ee Masar (oo aan lahayn duulimaadyo ganacsi) iyo Ben Gurion International Airport oo u dhow Tel Aviv ().
Shaqaalaha Falastiiniyiinta waxay sugayaan Isgoyska Erez, waxay filayaan dhibaatooyin waaweyn iyo waqtiyo sugitaan dheer.
Meesha ugu weyn ee laga soo galo waa marinka Erez ee waqooyiga, xadka ay la wadaagaan Israel. Helitaanka Erez waxaa ugu sahlan tagsi, sidoo kale waa suuragal in lagu safro Dan BaDarom bas # 20 laga bilaabo Ashkelon ilaa barta isbaaro.
Waxaad ruqsad uga baahan doontaa Ciidanka Israel, ama kaarka GPO (press). Haddii aad haysato rukhsad, waxaad u baahan tahay isuduwid aad la yeelatid Ciidanka Israel, oo cayimaya goorta aad qorsheyneyso inaad gasho kana baxdo Gaza. Saxafiyiinta wata Kaarka Xafiiska Saxaafada Dowlada (GPO) way imaan karaan waana tagi karaan sida ay doonaan. Kaliya gawaarida wadashaqeyn hore leh (sida xoogaa gawaarida UN-ka ah) ayaa loo oggol yahay inay galaan waxaana kaliya ka dib baaritaan dhameystiran, oo laga yaabo inay bilo qaadato. Waa waxtar badan in lala safro qof socodsiiya gauntlet ka hor waqtiga ugu horreeya ee loo maro Erez.
Erez, waa inaad ugu tagtaa askariga Israel sanduuqa kiniinka. Waxaa laga yaabaa inay ku weydiistaan ​​inaad ka furto boorsooyinkaaga miiska, iyo (sida TLV) ay ku weydiiyaan inaad hub leedahay. Waxay hubin doonaan baasaboorradaada iyo oggolaanshaha gelitaanka la oggol yahay. Kadib waxaad ku sugeysaa banaanka irid elektiroonig ah si markagaaga looga yeero. Markaa waxaad geleysaa garoonka, baasaboorkaaga iyo iskuxidhkiisa waxaad u dhiibaysaa askari kale si aad u hesho shaambada bixitaanka Israel. Askarigaas ayaa laga yaabaa ama kuma weydiin karo su'aalo dheeraad ah-badanaa waxyaabaha sida haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee Gaza, iwm.
Haddii wax walboo lagu qanco, dib u laabo dukumintiyadaada oo raac calaamadaha kugu hagaya Gaza. Markaad ka baxdo boosteejada, waxaad ku dhammaaneysaa tunnel laami ah oo madhalays ah. Ha keenin wax aad u weyn maxaa yeelay waa inaad ka gudubtaa albaab laga leexdo. Markaad ka soo baxdo tunnelka, waxaad ka gudbeysaa dhul aan cidna lahayn. Tani waa ugu yaraan 1000m oo dherer ah, waxayna leedahay aragtiyo qurxoon oo dhul cidla ah, oo loo malaynayo in laga qodey. Falastiiniyiinta waa loo oggol yahay aaggan markaa waxaad nasiib u yeelan kartaa oo aad heli kartaa xamaal, mootooyin, kursiga curyaamiinta, ama wixii la mid ah. Qaado. Haddii aad qaadato tuk-tuk, gacmahaaga ku hay gaariga dhexdiisa marwalba oo ku raaxeyso raacitaanka. Darawalku wuxuu noqon doonaa mid saaxiibtinimo leh - maahan in qof walba oo Gaza jooga uu doonayo inuu ku toogto ama ku afduubo!
Tunnelka albaabka ka dib waxaad ka soo bixi doontaa meel u dhow aqal yar. Kani waa isbaaro la iska indhatiri karo wadada loo maro Qaza (laakiin waa la iska indhatirayaa qatartaada xaga soo noqoshada). Laga soo bilaabo 2012, dadka kaliya ee halkan jooga waxay noqon doonaan dhawr darawal tagsi.
Taksi u qaado barta koontarool ee Falastiin, 800m kale wadada. Heerka socodka waa person 3 qofkiiba. Waxaa lagaa raadin doonaa waxyaabo sharci darro ah (hubi inaad tahay, waa aqal midigta ka xiga. Sidoo kale booqo buulka bidix si aad u hubiso aqoonsigaaga Xamaas — cusub tan iyo Oktoobar 2011)
Alaabada la mamnuucay waa cunno aan xalaal aheyn, oo ay mamnuucday dowladda Xamaas. Haddii aad ku guuldareysato kormeerka, markaa sida ugu fiican, alaabadaada waa lala wareegi doonaa. Markii ugu xumaa, waa lagu xidhi doonaa; lagama yaabo inaad aragto wax qoryo ah xilligan.
Markaad soo marto, waxaad raaci kartaa taksi kale, ama waxay u badan tahay inuu kugu soo qaado xiriiriyahaaga deegaanka.
Dariiq kale oo loo maro ayaa ah Isgoyska Rafah ee Koonfurta, xadka Masar. Masuuliyiinta Masar ayaa darbi ka dul dhisay, wadada kaliya ee lagu soo gali karaana waa iyada oo la maro wado la yiraahdo Wadada Philadelphi. Wadada waxaa xukuma Xamaas, halka laga soo galo iyo kabixida waxaa gacanta ku haya Booliska Masar. Waxaad u baahan doontaa inaad soo qaadato baasaboor, maaddaama mas'uuliyiinta Masar guud ahaan aysan u oggolaan qofna inuu ka baxo Marinka Masar, xitaa haddii aad gasho waxay la imaan kartaa caqabad. Waxa kale oo laga yaabaa inay ku joojiyaan roondooyinka Xamaas markaad soo gasho.
Ka bax dhinaca dhulka
Gelitaanka, inkasta oo ay adag tahay, waa cirro marka la barbardhigo bixitaanka. Ka dib marka lagu dhigo barta kontorool ee Xamaas ee ku dhow Xamsa Xamsa, u tag safarka cad ee midigtaada si aad u hesho caddeynta bixitaankaaga.
Markaad soo marto, tag taksiga (₪ 3 / qof) qofka taga barta isbaarada (halkaasoo siligga siliggu ka bilaabmayo). Ka dib, u aad buul ku yaal dhinaca midig. Nin baa Baasaboorkaaga qaadan doona oo horay u soo wacaya si uu ugu sheego reer Israa’iiliyiinta aad soo socoto Iska dhaaf tan halistaada.
Markaad dib u hesho baasaboorkaaga, qaado tuk-tuk haddii ay suurtagal tahay, ama bilow safarka 1 km + ee aad ugu aado Israel.
Markaad gaarto dhammaadka tunnelka, waxaad arki doontaa dhowr albaab. Marka dad faro ku tiris ah ay isoo urursadaan, mid ka mid ah albaabada ayaa furmaya (oo lagu muujiyay iftiinka cagaaran ee albaabka dushiisa).
Waxaad markaa geli doontaa hool miiska saaran oo Xarunta yaal. Miiskaaga ka fur miiska (ma jiraan calaamado muuqda oo tan lagu samayn karo, laakiin kor u fiiri oo kamarad baa jirta. Waxay hubinayaan waxyaabo muuqda sida bambooyin waaweyn)
Markay hubiyaan inaadan ku haysan shay alaab mamnuucaya boorsooyinkaaga, mari maraha dambe marka nalku cagaaranyahay. Ma heli doontid hadal ah “OK”, laakiin iska hubi in lagugu qaylin doono af Cibraaniga haddii aadan fiicnayn.
Waxaad ku arki doontaa qalabka musqusha midigtaada. Iyaga isticmaal. Raac falaaraha reer binu Israa'iil. Kadib waxaad la kulmi doontaa hool kale oo leh sideed albaab. Sug ilaa mid ka mid ah laydhku cagaaran yahay ka dibna gala albaabkaas. Boorsooyinkaaga uga tag xammaalyaha skaanka weyn ee amniga. Waa inaad ka saarto qalabka elektarooniga oo dhan kumbuyuutarrada gacanta oo keliya, laakiin waxyaabaha sida disk disk-ka, taleefannada gacanta, iwm.) Oo waxaad dhigtaa baakadaha waaweyn. Ka saar suunkaaga, saacaddaada, iwm.
Baasaboorkaaga iyo Aqoonsigaaga dushaada saar oo waxaad gashaa albaabbo taxane ah sida nalalku u dhalaalayaan cagaar. Markaad timaaddo iskaanka jirka (skaanka MMW), cagahaaga dul saar calaamadaha oo gacmahaaga madaxaaga saar meel "Waan dhiibtay". Baasaboorkaaga gacantaada ku hay. Haddii aad ka gudubtay baaritaanka hore, waxaa laguu oggolaan doonaa hool ay u muuqato in boorsooyinkaagu ay ka soo baxayaan suunka xambaarka. Xitaa waxaa jiri kara baakado madhan oo ku meeraysan.
Si toos ah ugu soco qolka bixitaanka, maadaama bacdaada loo dooran doono raadinta gacanta. Dhinaca bidix ee safka ah halkaas oo ay ku soo ururi doonaan saxaarado boorsooyin wata, oo waxaad arkaysaa ilaalada oo baaraya boorsooyinkaaga. Samir ku sug Haddii aadan ka gudbin baaritaanka hore, waxaa lagugu hagaajin doonaa baaritaan dheeraad ah. Waxaa jira qayb gooni ah oo iskeed kuu soo bandhigi doonta haddii ilaalada galalka kore ku yaal ay helaan baahi loo qabo raadinta xariiqda.
Markaad alaabtaada urursato, waxaad aakhirka mari doontaa soo gelitaanka Israa'iil, oo waxaad ku heli doontaa shaabad cusub baasaaboorkaaga. Adigu markaa xor ayaad tahay oo waxaad ku dhex jirtaa Israa'iil. Isku kalsoonow inaad nasiib badan tahay haddii aad leedahay baasaboor reer galbeed ah.
Ka bixida Gaza waxay qaadan kartaa 30 daqiiqo ilaa dhowr saacadood. Isbaarada ayaa xirmeysa 14:00, ama xitaa kahor. Haddii aad ku dheggan tahay inta u dhexeysa Xamaas iyo Israa’iil taleefan u dir safaaraddaada si ay kaaga caawiso, laakiin ha isku dayin inaad dib u gasho Gaza.
The dekedda Qaza waa mid aan shaqeyn, biyaha Gazan, dekadaha, iyo xeebta waxaa ilaaliya ciidamada badda ee Israel. Haddii aad isku daydo inaad doon ku gaarto xeebta Qaza, waxaa ku joojinaya maraakiibta ciidamada badda ee Israa’iil, oo dib ayaa laguugu celin doonaa. Kaliya doomaha leh rukhsad hore ayaa loo oggol yahay. Dhammaan doomaha ka imanaya Gaza waxaa loo oggol yahay inay ku dhiiradaan lix mayl badeed oo badda ah. Markab kasta oo khadka ka gudba waa la rasaaseeyay. Sannadkii 2010-kii markab maraakiib ah oo ka kooban lix markab ayaa isku dayay inuu gaaro Qaza dhanka badda, waxaana dhexda u galay maraakiibta dagaalka ee Israa’iil; toban qof ayay dileen ciidamada Israel maraakiibtuna waligood ma gaarin Gaza. Waxaa si xoog leh lagula talinayaa inaadan isku dayin inaad booqato Qaza qaabkan.
Ma jiro gaadiid dadweyne oo Gaza jooga, laakiin waxaa jira tiro badan adeegga (ser-VEESS) tagaasida. Raadinta waxaa lagu sameeyaa astaamo caan ah, maahan cinwaanka waddada. Istaag wadada dhinaceeda jihada safarka la rabo. Marka darawalku istaago waxay tilmaamayaan meesha loo socdo tusaale ahaan, “Shifa” iyo tirada rakaabka (“wahid” mid, “it-nayn” labo.) Haddii darawalku uusan wadadaas u jeedin, wuu gaari karaa. Safar kor iyo hoos u socdaal Omar al-Mukhtar St. ayaa dib kuu dhigi doonta set 1; safarada meelo kale waa laga gorgortami karaa. Meel u dhow isbitaalka al-Shifa waxaa ku jira taxsi tagaasida oo u safra meelo ka baxsan magaalada Gaza. Wadayaasha baabuurta ayaa ku qeylinaya meesha ay u socdaan waxayna sugayaan inta gawaaridoodu ay ka buuxsamayso inta aysan bixin. Waxaa lagugula talinayaa inaad daawato tallaabadaada haddii aad socoto, maaddaama taraafikada ay fowdo tahay oo waddooyinka la soo maro ay yihiin kuwo aan jirin.
Luqadda caadiga ahi waa Carabi Ingiriisina waa la fahmay.
Masjidka weyn ee Omari ee Gaza.
Qaza maahan meesha ugu sareysa ee loo dalxiis tago, inta badan meelaha soo jiidashada leh waxay garaaceen xoogaa 50 sano ee la soo dhaafay. Kuwa soo socda dhammaantood waxay ku yaalliin Magaalada Qaza.
Masaajidka Grand Omari (- عامع غزة الكبير, Jāmaʿ Ghazza al-Kabīr). Waxay u egtahay muuqaalkeeda jilicsan taariikh xiisa leh: waa kaniisad Crusader ah oo la beddelay oo laga dhisay goobta macbadka Hellenic oo leh tiirar ka yimid sunagogga Yuhuudda ee qarnigii 3-aad. (cusbooneysiiyay Feb 2015)
Kaniisadda Saint Porphyrius. Kaniisadda Orthodox, dabaaldeg Saint Porphyrius kaasoo ahaa Bishop-ka Gaza qiyaastii 395-420 CE. Kaniisadda hadda jirta waxaa la dhisay qiyaastii 1150 oo ay sameeyeen saliibiyiin waxaana dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay 1856. (cusbooneysiiyay Feb 2015)
Tacliin badan ayaa noqon karta booqashada UNRWA ay ku diyaarisay mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ee ku yaal barta. Xafiiska UNRWA wuxuu ku yaal al-Azhar St, oo u dhow Jaamacadda Islaamka, horay u soo wac si aad u aragto haddii ay diyaarin karaan safar yar. Meesha ugu macquulsan ee aad tagi kartid waa rajada la magacaabay Xerada Xeebta, oo ah buuriyo ka sameysan buulal shubka ah iyo bulaacado furan oo ay dagan yihiin 63,000 oo qof, oo laga dhisay meel xeeb ah oo bacaad ah - halkaasna waad ku socon kartaa kaligaa, 15 daqiiqo oo woqooyi ka xigta isgoyska Omar al-Mukhtar St. oo leh wadada xeebta. UNRWA waxay si xikmad leh ugu talineysaa in laga fogaado dharka militariga. Xerada qaxootiga ee Jabaliya sidoo kale waa ikhtiyaar u dhow. Haweenka booqda xeryaha waa inay u labistaan ​​si ka dhawrsanaan ka badan tan ay ugu baahan yihiin magaalada Qaza - xijaabka ayaa si dhab ah lagula taliyay.
Maxaa laga sameeyaa Marinka Gaza
Wax aad u yar ayaa lagu qabtaa Qaza celcelis ahaan dalxiis. Waxaa jira qorax dhac fiican inkasta oo ay ka weyn tahay Med, taas oo laga arki karo hudheelada sida Al Deira.
Hamam al-Sumara. Markii ugu dambeysay ee 'maydhashada Turkiga' ee Gaza. Saacado kaladuwan oo loogu talagalay ragga iyo dumarka, adeeg aad ufiican iyo xoqitaan haboon. Inta udhaxeysa Fagaaraha Falastiin iyo Wadada Saladiin. (cusbooneysiiyay Feb 2015)
In kasta oo ay jiraan isku dhacyo iyo hadallo xasaasi ah, haddana Gazansku waxay adeegsadaan Lacagta Israel laakiin sidoo kale US Dollar ama Euro. Keen qaar ka mid ah sanaadiiqda sigaarka Strip qof walbana wuxuu noqon doonaa saaxiibkaa. Si kastaba ha noqotee, fadlan la soco bilayska ku sugan barta kontoroolka ee Xamaas ee Gaza ayaa hadda furaya dhammaan boorsooyinka waxayna ixtiraamayaan dhaqanka Islaamka ee maxalliga ah.
Mall Gaza. Mall-kan xarrago leh ee la furay 2010-kii ayaa ah goobta looga baxsan karo xuddunta degmada Rimal ee mashquulka badan. Iyada oo leh supermarket si buuxda u buuxan, makhaayad cunno dhakhso leh leh iyo dukaamo badan, Gazans si deg deg ah ayey ku yimaadeen meeshan. Ku raaxayso ilaha nasashada haddii aad wax kugu filan ka iibsatay ama aad u baahato nasasho. Mall-ka Gaza wuxuu u dhigmaa inta badan suuqyada qaab-dhismeedka reer galbeedka oo kaliya qaab dhismeedka iyo raaxada, laakiin xitaa kuma fogaan cabbirka. Sida caadiga ah waxaad ku arkeysaa iyada oo ay kuxiran yihiin dadka deggan Rimal xagaaga oo ka cararaya kuleylka duhurkii waxaana laga yaabaa inaad si deg deg ah u ogaato inaad rabto inaad u baxsato meel kale.
Dukaanka Calanka PLO. Xoogaa adag in la helo (hareeraha weydii) laakiin shaki kuma jiro marka aad aragto. Waa goobta laga gato calanka Falastiin, istiikarada, calaamadaha, iyo qalinka. Waxay sidoo kale caan ku ahayd halyeeyga la buufin karo Yasser Arafat - runti naxdin leh qarxis tennis raket thingy ah oo lagu xardhay khariidadda Falastiin oo dhinac ah iyo muuqaal kale oo waji madow leh - laakiin laga bilaabo Janaayo 2005, waxay lahaayeen hal kaliya, oo wax qiimo ah laguma iibin.
Sawir gacmeedyo / laambado xiiso leh oo laga sameeyay kartoono sigaar duug ah.
Foustouk iyo simsimiya. Tan hore waa cunno fudud oo looska ku dheggan. Tan dambe waa sisinta inaadeerkeed. Nin da 'ah oo ku nool Magaalada Qaza oo leh jaakad jilicsan oo jilicsan ayaa ka soo goysa gees kale oo waddo ah markii uu haysto dufcad cusub.
Suuqa wadada oo leh khudaar iyo miro iib ah
Cunnada carabiga ee caadiga ah ayaa laga heli karaa meel kasta. Madaxa xaafada posh ee Rimal raashin macaan; hudheelka ku yaal Windmill Hotel wuu fiican yahay. Sidoo kale maskaxda ku hay in haddii aad rabto inaad soo qaadato wax cunto ah, waa inaad marka hore hubisaa cuntooyinka ay yihiin iyo kuwa aan laga aqbali karin Islaamka. Haddii lagugu qabto cunno mamnuuc ah, waxay u horseedi kartaa dhibaato maamulka ama dadka deegaanka. Ugu dambeyntiina, ma aha wax la maqli karo oo casho sharaf lagu casuumay.
Abuu Xaseera. Khabiirka kalluunka.
Makhaayada Aldeira. Xeebta dhinaceeda, makhaayadani waxay u adeegtaa cuncun qurux badan (suxuunta yar-yar ee Mediterranean-ka loo yaqaan), oo ay ku jiraan Gazan qaaska ah Daqqa (salad qaali ah oo mararka qaar aad u basbaas badan, aad u fiican). Waxay sidoo kale leeyihiin koorsooyin waaweyn oo dhadhan fiican leh: iskuday shiribka maraqa yaanyo, foornada lagu dubay, waxaadna ugu adeegtaa dheriga dhoobada ah. Ha seegin cabitaanka miraha strawberry cusub! Lagu xoojiyay qaadashada jalaatada-vanilj, waa wax aad loogu raaxeysto. Xusuusnow in iibinta aalkolada ee Gaza ay xaddidan tahay iyo tan ugu dambaysay, ma soo qaadan kartid markii aad timaaddo Marinka.
Matouk (Ka dambeeya dhismaha golaha sharci dejinta). Waxay u adeegtaa tawwouk digaag aad u fiican.
Naadiga xididdada, Qaahira St, Remal (oo ku taal bartamaha Magaalada Qaza),, fax: + 972 8 2888999. Cunto wanaagsan. Waxay ku siisaa cunnooyinka dhammaadka sare ee Carabta / Mediterranean iyo cunto dhakhso ka raqiisan lifaaqa Big Bite. Makhaayada ayaa had iyo jeer qabata munaasabado gaar ah, oo ay ku jiraan marti sharaf ajnabi ah iyo madaxda hay'adaha aan dowliga ahayn.
Makhaayada Cuntada badda (kaliya woqooyiga hotel al-Deira). Makhaayada cuntada baddu aad u wanaagsan tahay.
Dalxiiska Al Mat'haf (Xeebta Soudnya),. Buur yar oo indha indheysa badda Gaza waxaa ku yaal "Al-Mathaf" (Carabi ahaan loogu talagalay "Matxafka", waxaa loogu dhawaaqaa Al-Mat-Haf), oo ah goob madadaalo iyo dhaqan dhaqameed mid ka mid ah oo soo bandhigaya taariikhdii hore ee Qasa iyo si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmay macnaha nolosha ee Gaza casriga ah. Sida magaceedaba ka muuqata, Al-Mathaf wuxuu hoy u yahay matxafka qadiimiga ah ee Qasa, kaas oo ay ka buuxaan waxyaabo aad u qurux badan oo u dabaaldega hiddaha iyo dhaqanka Gaza. Dhinacyadan kaydka taariikhiga ah ee ilbaxnimooyinkii hore, Gazans-ka maanta waxay isugu soo urureen Al-Mathaf's Restaurant-Café, oo ah xarun dhaqameed casri ah iyo madadaalo Gaza. Waqtiga in badan oo reer Gaza ah ay iloobeen dhaxalkeenii, Al-Mathaf wuxuu hiigsanayaa inuu ilaaliyo gobolada taariikhda hodanka ku ah, inuu helo goob wadahadal dhaqameed casri ah, iyo inuu farriin u sido jiilkan si loo dhiso mustaqbal ifaya.
Halkee lagu joogayaa Marinka Gaza
Muuqaalka badda ee hudheelka Al Deira
Waxaa Gaza ku yaal dhowr hudheel. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa macquul inaad la joogto dadka maxalliga ah oo xitaa kugu casuumi kara habeen.
Hotel Aldeira, Wadada Al Rasheed,, fax: + 972 8 283 8400. Qolal baaxad leh oo leh aragtida badda, quraacdii ayaa ka mid ahayd. Inta badan suxufiyiinta caalamiga ah iyo ururada samafalka waxay joogaan Deira, oo leh koronto-dhaliyaha, Xarunta Ganacsiga iyo WiFi. Raaxo leh (inkasta oo heerarka Gaza aysan fiicnayn) makhaayad (oo leh tuubooyin Shisha, inkasta oo aan loo oggolayn qolalka wanaagsan ee Bariga). Ha ka welwelin in biyuhu dhadhamiyeen cusbada. Qolalka waxaa ka mid ah minibar aan khamri lahayn, timo-qallajiye, shukumaanno, saabuun, shaambo, qaboojiye, iyo saxan yar oo buskud ah. $ 100-185USD / habeenkii.
Hotel Commodore. Waxay leedahay sauna, jacuzzi, duugis, makhaayado badan, adeega qolka 24-ka saac, barkad dabaal, iyo sida la sheegay cuntada Kosher.
Hotel Grand Palace, Wadada Al Rasheed,, fax: + 970 8 2849497. Dhinaca xeebta ee magaalada Gaza, 3km u jirta Bartamaha magaalada, muuqaalka xeebta tooska ah, shirka, tas -hiilaadka cuntada iyo cabitaanka.
Guriga Marna. Hotelka ugu da'da weyn Qaza, oo ay maamusho qoys saaxiibtinimo leh.
Al Mathax Hotel, info@almathaf.ps (Xeebta Soudunya),. Marxaladda labaad, Al-Mathaf waxaa hadda la dhameystiray dhismaha hudheel qurxoon, oo ay ka muuqan doonaan qolal dhaqan ahaan loo qaabeeyey oo leh aragtida badda, iyo sidoo kale hoolal ujeedooyin badan leh iyo xarumo lagu bixiyo adeegyada ganacsiga, iyo sidoo kale caafimaadka, jir dhiska, iyo spa facilitie (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xaqiiq ahaan, haddii aadan midkood ahayn shaqaale gargaar, weriye ama diblomaasi, wax shaqo ah oo adiga laguguma hayo Gaza. Waxaa jira tiro NGO-yo ah oo bixiya layliyo, sida Ururka Al-Dameer ee Xuquuqda Aadanaha ee Gaza, Xarunta Falastiiniyiinta ee Xuquuqda Aadanaha iyo kuwa kale, laakiin kuwan si fiican ayaa loo qabanqaabin doonaa ka hor intaanad tagin Gaza.
Ammaan ku joog Marinka Qaza
Marinka Qaza mararka qaar waxaa ka dhaca hawlgallo militari oo Israa’iil ah (oo ay ku jiraan duqeymaha cirka iyo badda iyo sidoo kale duulaanka dhulka) iyo sidoo kale iska hor imaadyo hubeysan oo u dhexeeya maamulka Xamaas iyo kooxaha Fatax. In kasta oo Xamaas ay ku guuleysatay inay xakameyso heerarka dambiyada ee Gaza, xubnaha qaar ayaa lagu yaqaan inay garaacaan saxafiyiinta isku dayaya inay tabiyaan mudaharaadyada looga soo horjeedo Xamaas. Guud ahaan, adeegso caqliga saliimka ah iskana ilaali xaaladaha noocaan ah. La tasho safaaraddaada wixii talo ah iyo xaaladaha jira ka hor intaadan safrin. Si ka duwan dukumiintiyada safarka ee Daanta Galbeed uma baahna in marwalba la hayo.
Saldhigga korontada Qaza iyo xaruntiisa ayaa si xun u waxyeeleeyeen duqeymaha diyaaradaha Israel mana sii shaqeynayaan meeshii loogu talagalay. Koronto la’aanta ayaa aad u badan tan iyo markii Komishanka Yurub uu ku wareejiyay maamulka shidaalka maamulka Falastiin sanadii 2009 maadaama Xamaas ilaa iyo hada ay ku fashilantay inay bixiso 20% kharashka shidaalka. Joogitaanadan waxaa diidaya warshadaha waaweyn iyo matoorrada naaftada ah ee yaryar kuwaas oo isku daraya si ay u abuuraan cacophony oo dadka deegaanka ay si uun ugu nuglaadeen. Qaar ka mid ah koronto-dhaliyeyaashan ayaa si liidata loo dayactiray waxayna ka sii daayaan kaarboon monoksaydh. Soo-booqdeyaashu waa inay ka digtoonaadaan tan, gaar ahaan meelaha xiran ee ay ku caddeeyeen inay ku dhinteen.
Caafimaad ku joog Marinka Qaza
Biyaha tuubada Qaza laguma cabi karo oo badanaa waa wasakh qatar ah. Huteelada qaarkood ayaa isticmaali kara miirayaasha laakiin haddii shaki ku jiro, kaliya iibso dhalooyinka.
Israa’iil ayaa go’doomisay aaggaas tan iyo 2007. Hase yeeshe, cuntada iyo agabka caafimaad guud ahaan waa loo oggol yahay gelitaanka ka dib. Shuruudo kasta oo waaweyn ama caafimaad oo caadi ah waa in laga helaa meelo kale. Qof kasta oo booqda Gaza waxaa si fiican lagula taliyay inuu haysto aasaas wanaagsan gargaarka degdegga ah, oo ay siiyaan xirmooyinka gargaarka degdegga ah.
Dharka muxaafidka ah, gaar ahaan haddii aad geleyso xeryaha qaxootiga. Muxaafid ahaan halkan waxaa loola jeedaa, magaalada Qaza gudaheeda dusha sare oo leh gacmo dhaadheer gabi ahaanba wax jaban oo xagga hore ah. Fikrad ahaan, dusha sare sidoo kale waa inuu dheeraadaa. Surwaalku waa ku habboon yahay illaa iyo inta ay dabacsan yihiin oo dhererkoodu dhan yahay, oo aan ahayn surwaal madax bannaan.
Maskaxda ku hay in marinka loo maro labada dal midkoodna uu xaddidan yahay:
Ma jiraan makhaayado hadda liis garaysan
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Falastiin > Tilmaamaha Safarka Marinka Qaza
Cunnooyinka iyo cabbitaannada kala duwan ee leh Shahaadada Xalaasha ah ee laga helo MUI ayaa lagu raaxeysan karaa kafeega Dapoer ama de Terrace maalmihii hore ee nuanced